१७ श्रावण, २०७७ – Mero UK
Day: १७ श्रावण, २०७७
१७ श्रावण, २०७७ १७ श्रावण, २०७७ / अनलाइन खबर
१७ साउन, सिन्धुपाल्चोक । हेरक खाले विपत्ति सिन्धुपाल्चोकसँग जोडिएका छन् । विसं २०७१ को जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प अनि २०७७ को भोटेकोशी पहिरो । सिन्धुपाल्चोकमा यस्ता घटना भइरहेका छन् तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् । आजभन्दा ठीक छ वर्षअघि साउन १७ गते जुरेमाथिबाट पहाड खस्दा जुरेको सिङ्गो बस्ती पुरियो भने १४५ जनाको …
जुरे पहिरोका पीडित भन्छन्–अझै राहत पाइएन Read More »
१७ साउन, इनरुवा । सुनसरीको बराहाक्षेत्र नगरपालिका-१ कोशीगढमा शनिबार डुङ्गा (नाउ) दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुईको भने उद्दार गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा भोजपुर आपचोक गाउँपालिका-८ का २० वर्षीय राजकुमार राई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बराह क्षेत्रले जनाएको छ ।दुर्घटनामा परेका भोजपुर आपचोक गाउँपालिका-८ का शङकर राई र अजय राईको उद्दार …
डुङगा दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुईको उद्दार Read More »
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य अम्बिकुमारी थापा मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएकी छिन् । कैलालीको धनगढीबाट जुगेडातर्फ जाँदै गर्दा पछाडीबाट आएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि उनी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । उनको टाउकोमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतिक बिष्टले बताए । उनले धनगढीस्थित मायामेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको …
मोटरसाइकल दुर्घटनामा प्रदेशसभा सदस्य थापा घाइते Read More »
१७ साउन, वीरगञ्ज । समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको मानिएको वीरगञ्जमा शनिबार मात्र कोभिड-१९ बाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै पछिल्लो १० दिनमा वीरगञ्जमा मात्र कोरोना संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भएको छ । वीरगञ्ज-१६ नगवा बस्ने ६० बर्षीया महिलाको शनिबार साँझ ६ बजे उनको मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. » पुरा समाचार …
वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु Read More »
१७ साउन, विराटनगर । श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो अभिव्यक्ति दिँदै आएका उपसचिव सञ्जेलमाथि शनिबार बिहान करिब ११ बजे कार्यकक्षमै कुटपिट भएको हो । कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई महिला कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र भट्टराई र मेनुका सापकोटा …
कार्यकक्षमै कुटिए उपसचिव प्रेम सञ्जेल Read More »
१७ साउन, जनकपुरधाम । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएर १४ दिन आइसोलेनसमा बसेकाहरुलाई विना परीक्षण घर पठाउँदा सरकारले केही करोड त जोगायो होला । तर कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका धेरैले छिःछि दुरदुरको व्यवहार सहनु परेको छ । र, घरपरिवार, आफन्त र समाजको त्यही दुर्व्यवहार सहन नसकेर धनुषाको एक पुरुषले प्राण त्यागेका छन् । …
विशेश्वरको आत्महत्या : कोरोनालाई जिते, गाउँ समाजसँग हारे ! Read More »
१७ साउन, गुल्मी । गुल्मीमा अविरल वर्षासँगै घरमाथि ढुंगा खस्दा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर–५ टाहाटिम आटीपाटामा घरमाथि ढुंगा खसेर च्याप्दा ३० वर्षकी बिना बोटेमाझी, उनका छोरा ९ वर्षका सागर, ७ वर्षका हेमन्त र १० महिनाकी छोरी बिनिताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए …
गुल्मीमा पहिरो, एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु Read More »